သင်ဟာအရောင်းအ ၀ ယ်အစပြုသူဖြစ်ဖြစ်အဆင့်မြင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စတော့အိတ်ချိန်းမှာဖျော်ဖြေဖို့ Ichimoku တိမ်တိုက်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဒီမှာငါပေးမယ်။.
ကျွန်တော့်နာမည် Philippe ပါ။ ကျွန်တော်ဟာကုန်သွယ်ရေးကုန်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးစတော့အိတ်ချိန်းကို ၁၅ နှစ်ကျော်အလိုရှိခဲ့တယ်၊ Range Trading မှအထူးကုနှင့် Ichimoku Kinko Hyo စနစ်။ ဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာမင်းဆီကို A မှ Z ကိုလမ်းပြပေးလိမ့်မယ်။
- ကုန်သွယ်မှု၏အခြေခံများ - အလေ့အကျင့်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမှသည်ဂျပန်မီးခွက်များ၊
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Ichimoku တိမ်တိုက်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုပေးတဲ့ Trading Range နည်းလမ်း
Day Trading Kumo-Range Trading နည်းလမ်း - Forex၊ စတော့အိတ်ချိန်း ဒီဇင်ဘာလ 12, 2020Tranquillus
ဖတ်ရန် ဖျားနာခွင့်အတွက် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး အားအလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်း - အလွန်အရေးကြီးသည့်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်းဖြစ်သော်လည်းမည်သည့်အချိန်ကာလအတွင်း?
လွန်ခဲ့သောအစပြုသူအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု: A မှ Z အထိ